I-Fibromyalgia Flare-ups kunye nee-Trigger [Xa Iimpawu ziQatshelwe ngokuchanekileyo]
I-Fibromyalgia Flare-ups kunye neeTigger
09 / 03 / 2019 /0 Amazwana/i udinwe/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia Flare-ups kunye nee-Trigger: Xa Iimpawu ziba Zezona zibalulekileyo
Ngaba uvile ngefibromyalgia flare-ups? Okanye uyazibuza ukuba kutheni iimpawu zakho ze-fibromyalgia ngamanye amaxesha ziba mandundu ngakumbi-yonke indlela yokuphuma kublowu? Apha siza kukufundisa ngakumbi malunga ne-fibromyalgia flares, loluphi uhlobo lweempawu onokuzifumana, zeziphi izinto ezinokubangela ukuba uzilumkele- kwaye, ubuncinci, onokukwenza ukuyikhulula.
I-Fibromyalgia inokuhamba ngamaza kunye neentlambo - ezinye iintsuku zinokuba mandundu ngakumbi kunezinye. Ngamanye amaxesha, ungalala kwaye ucinge ukuba izinto azimbi kangako-kwaye uvuke ngeyona ntlungu yabo ngentsasa elandelayo. Yiyo le nto yenzekayo yeempawu ezaziwayo ezibizwa ngokuba yi-fibromyalgia flares (ukuvuleka njengesiNgesi esi eziba).
Eli nqaku lihamba ngenkcazo yemililo, iimpawu, izinto ezaziwayo ezibangela oko kunye nento onokuyenza ukujongana nokukhusela ezo ziqendu- ezinye zazo zinokumangalisa. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi kwaye ufumane neengcebiso ezilungileyo.
1. Inkcazo yeFibromyalgia Flares
Kwabaninzi bethu abane-fibromyalgia, iimpawu zihlala zihluka ngemini. Kuya kubakho amaxesha apho iintlungu ziba mandundu-kwaye namaxesha apho kuthande ukuba nzima. Ke ngoko, ngamathuba apho iimpawu zibonakalisile ukuya kuthi ga kwiqondo labo elichazwe njenge I flares.
Yiyo loo nto uFlares echaza ukuba mandundu ukwanda kweentlungu zakho zeempawu ezinamandla kunye neempawu. Olo thamsanqa luye luqhubeke kangangeentsuku okanye iiveki.
Ngaba uyazi ukuba imithambo yemihla ngemihla yokuziqhelanisa nayo ehambelana ne-fibromyalgia inokubonelela ngophawu lweflage? Ungayibona inkqubo enjalo yoqeqesho apha ngezantsi.
Ukuzolula ngokuthe cwaka nangokuthambileyo kunye nokuzivocavoca kunokunyusa ukuhamba kunye nokuhamba kwegazi okufunekayo kwimisipha ebuhlungu kunye nokudibana okuqinileyo. Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ubone inkqubo yokuzivocavoca emihlanu eyokukunceda kwintlungu.
2. Iimpawu zeFibromyalgia Flares
Iimpawu zefibromyalgia flares zihlala zihluka kwiimpawu eziqhelekileyo ze-fibromyalgia. Zihlala zomelele kunezo ubuqhele ukuziva kwaye zinokuhlala ixesha elide.
Iimpawu onokuthi ubenazo zinjengeziqendu eziqhelekileyo:
Uxinzelelo kunye nokugqithisa
Ubuhlungu kwimisipha, kwimisipha kunye nokudibana
Iziphumo emzimbeni (ngokuka ngumkhuhlane)
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezinganyangekiyo nezifo ezichitha yonke imihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi, "Ewe kuphando olunzulu malunga nokuxilonga kubuhlungu beentlungu".
Funda: Iindidi ezi-7 zeFibromyalgia Pain [Isikhokelo esikhulu]
Ngaba uyazi ukuba kukho iindidi ezisixhenxe zentlungu ye-fibromyalgia?
3. Unobangela kunye nokuCetywa kweFibromyalgia Flares
Ayaziwa ngokuthe ngqo ukuba kutheni i-flares isenzeka-kodwa enye ikwazile ukufumanisa inani lezinto ezibangela kunye nezinto. Ezi zinto zixabisayo zinokwahluka kumntu nomntu.
Izinto ezinokubangela ukuba:
Uxinzelelo lweemvakalelo kunye nomzimba
Ukwenzakala okanye ukwenzakala
Olu aluluhlu olupheleleyo -Ngenxa yokuba unokuba nakho ukubangela izinto ezizezinye. Oko kukuthi, izinto ezichaphazela kuphela ngokuchanekileyo deg.
Ngaba uyazi ukuba uqeqesho lomzimba lunokukunceda kwimiceli mngeni yengqondo nangokomzimba? Uqeqesho lweqela kwichibi lamanzi ashushu anombono ofanayo unokuba nomvuzo omkhulu. Unokufunda ngakumbi malunga nayo kwikhonkco elingezantsi.
4. Unyango kunye neMilinganiselo yeFibromyalgia Flares
Kukho iindlela ezahlukeneyo zonyango ezinokunceda kwi-fibromyalgia flare-ups-kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba baxhomekeke kwinto ebangela ukuba ibekho. Iziqwengana ezininzi zeflodromyalgia flares zinokukwenza udinwe kangangokuba ungabinakho ukujongana nezinye ngaphandle kokubamba isingqengqelo.
Imilinganiselo umntu ayibonileyo enokunceda ukunceda yile:
Unyango lomzimba kunye nokuthambisa
Ingqondo kunye neendlela zokuphefumla
Ngelishwa, kunokuthatha ixesha ukuba olo nyango lusebenze- kwaye yiyo loo nto abantu abaninzi bekhetha ukusebenzisa la manyathelo ngaphandle kwexesha leentlungu.
Kunconywe ukuNceda ngokwakho kwiRheumatic Pain
5. Ukulungiselela uFlare-up
Thina nge-fibromyalgia siyayazi ukuba ayingombuzo ukuba Siyenzakala, kodwa kunokuba yinto xa . Ke ngoko, kubaluleke ngokumangalisayo ukuba sizilungiselele ukuba ezi zinto zimbi zenzeke ngesiquphe- Ngale nto sithetha ukuba amayeza kufuneka acace kwaye amanyathelo okulungisa iintlungu alungisiwe (umzekelo, gasket ebandayo).
Ukudinwa okuhamba nokonakala okumandla kukwathetha ukuba asivunyelwanga ukwenza imisebenzi yasendlwini esifuna ukuyenza-oku kusenza sizive sibi ngakumbi. Kubalulekile ke, ngakumbi ukuba awutshatanga, ukuba uzame ukuba nomntu onxibelelana naye onokufumana ukubanjwa xa izinto zisiba mbi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nomasipala wakho ukuba ufuna uncedo malunga noku.
Ngaba uyazi ukuba kukho indalo yokunciphisa iintlungu kunye neendlela zokuhlaziya ezinokusetyenziselwa ukunyanga ukuphazamiseka kwengqondo (kubandakanya nefibromyalgia)? Unokufunda ngakumbi ngala manyathelo asibhozo kwinqaku elingezantsi.
6. Ukuthintela iFibromyalgia Flares
Isitshixo sokuthintela i-flare ixhomekeke ekwazini kwabo into ebashukumisayo kunye nokugcina iimvakalelo kunye noxinzelelo lomzimba e-bay. Abanye abantu bafumana uxolo ngeseshoni ethe cwaka echibini lamanzi ashushu- kwaye abanye bayonwabela ikomityi yeti eshushu kwikona yesofa. Sahlukile.
Sicebisa la manyathelo alandelayo ukuthintela iziqalo ezibi kakhulu zokwanda kobubi:
Susa amandla amabi ebomini bakho
Yenza into oyithandayo
Thetha nabahlobo bakho kunye nosapho malunga nemeko yakho
Vula malunga nezidingo zakho
Sukuyivimba indlela oziva ngayo ngaphakathi kwaye ungoyiki ukuthetha malunga noko kugula kwakho kukwenzela kona - ayikuko "ukukhalaza" xa usazisa ngentlungu yakho kusapho nakwabaziyo ukuze bakwazi ukuthathela ingqalelo kwaye babonakalise isigwebo sokuba kutheni unokuba namandla kancinci ngalo mini okanye ungazenzi ngokwakho.
Ufaneleke njengaye nabani na ongomnye - ungaze uvumele nabani na ukuba eze phantsi akwenze ukholelwe kwenye into.
Ngaba ukhathazwa ziintlungu ezingalweni nasezandleni Olu thambo mithandathu lunokukunceda ukugcina ukujikeleza kwegazi ezingalweni zakho namagxa imini yonke.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGI-FLARE-UPS_HIGH.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-09 16:17:042021-03-21 13:30:14I-Fibromyalgia Flare-ups kunye neeTigger
I-Fibromyalgia kunye neNhlungu Iimpawu ezi-Fibromyalgia ezaziwayo